IChiefs ingabathenga abadlali kodwa kumele batholane | IOL Isolezwe
IChiefs ingabathenga abadlali kodwa kumele batholane
Isolezwe / 19 June 2012, 12:24pm /
ABALANDELI beKaizer Chiefs bafanele ukuba nale njabulo engiyibona kwabaningi engivame ukuhlangana nabo kulezi zinsuku. Injabulo efana nale ngicishe ngiyifanise naleyo engike ngayibona kubalandeli belinye iqembu eliyizimbangi ezinkulu zaMakhosi – laba abangakakholwa namanje ukuthi yiqembu labo leli (elake labhuqwa yindlala yeminyaka) eliwine izindebe eziyisithupha kumasizini amabili edlule ePSL.
Uma ngithi ngiyalandela ukuthi ivelaphi le njabulo yabalandela Amakhosi kuyavela ukuthi baneliseke kakhulu ngabakubona kwenziwa yimenenja yabo uBobby Motaung eNaturena njengoba ebakhithizela lonke uhlobo lwabadlali abacabanga ukuthi bazocoboshisa ngabo konke okuzobe kubekwe esitikini ngesizini ezayo ka-2012/2013.
Uma ngibhekisisa ngiyabona ukuthi uBobby uyiqale emuva indaba yokuqinisa ezakhe njengoba eselethe uSiboniso “Pa” Gaxa noMorgan “Mr Reliable” Gould abake badla izicoco eziningi zeligi besadlala kuSuperSport United. Ngiyezwa futhi ukuthi abakaqedi ukukhithizela umqeqeshi wabo omusha, uStuart Baxter, abadlali basemuva njengoba kuyibo futhi okuthiwa bahamba phambili ekufuneni umdlali engicabanga ukuthi nguyena ohamba phambili kwabasemuva kuleli okwamanje, u-Eric Mathoho weBloemfontein Celtic.
Ngiye ngizwe abalazi kangcono ibhola bethi uma ufuna ukukhanda inqanawe yeqembu kufanele uliqale emuva ngaphambi kokuba ubheke phambili. Uma ubheka ukuthi ngemuva kukaGaxa noGould kuzobe kukhona unozinti abadlala naye kuBafana Bafana, u-Itumeleng Khune, uyabona ukuthi wukhonkolo wodwa lo oxovelwa uBaxter.
Unenhlanhla-ke umfo kaBaxter ngoba phela abangaphambi kwakhe bebethi noma bekhala ngalaba badlali bakaBobby abebalanda ngenhle imali eZimbabwe kungashiwo lutho ngaphandle kokuthi kuthiwe umqeqeshi akasebenze ngalokho anakho avale umlomo.
Isexwayiso nje engingasinikeza abalandeli beChiefs ngabadlali abahle wukuthi akusho lutho ukuthengwa kwabo kodwa okubalulekile wukuthi bahlangana ngendlela yini. Kuyefana nokuthi kunconywe umuntu ngokuthi uthenge unyanyavu lwemoto kodwa uma ingenawo uphethiloli ezongena ngawo emgwaqweni ifana nento engekho leyo moto.
Indaba yabadlali abahle ingikhumbuza nalo mqhudelwano wamazwe ase-Europe okhona. Uma kubhekwa iqembu elifana neNetherlands elashaywa yiSpain kowamanqamu weNdebe yoMhlaba kuleli ngo-2010 akekho obengaphupha ukuthi lizowasha ijezi kuseva.
INetherlands iyisibonelo esihle esinganikezwa abalandeli beChiefs ngeqembu elinezaqheqhe zabadlali kodwa elingakwazi ukudlala ngokubambisana enkundleni. Osekusele kuChiefs wukuthi uBaxter akwazi ukuhlanganisa izibabuli azithengelwe nabadlali abafice bevele bekhona bese kuphuma iqembu elizojabulisa izinkumbi zabalandeli beqembu lakhe iningi labo eselikhohliwe nawukuthi konje babegcine nini ukuwina isicoco seligi.
Angiphume-ke kwezithinta Amakhosi ngingene eqenjini lesizwe okumele siziqhenye sonke ngalo. Angikhulumi ngamaBhokobhoko lawa anayo yonke inhlobo yokwesekwa uma kukhulunywa ngabaxhasi nemali. Ngiyawancoma nawo enza kahle kakhulu kodwa olawo usuku nami luyeza.
Iqembu engifuna ukulincoma lapha yiBanyana Banyana eshaye iZambia ngempelasonto ingena kwi-African Women’s Championship ezodlalelwa e-Equatorial Guinea ngoNovemba. Labo sisi bangibusisile benza nosuku lwami lokuba ubaba ngeSonto lwaba mnandi kakhulu.
Uma kukhulunywa ngeqembu elinabadlali abasakwazi ukuhlonipha izwe kusuke kukhulunywa ngeBanyana. Leli qembu kumanje lilungiselela ukuyosimela okokuqala kuma-Olympic Games azoqala eLondon ngenyanga ezayo.
Umdlandla wokumela izwe nokulwa umdlalo uqala uze uyophela yinto okungafunda kuyo inqwaba yamaqembu ethu, ikakhulukazi lelo elisahlalelwe wumthwalo wokudlala kwi-African Nations Cup kuleli ngonyaka ozayo nokudlala imidlalo yokuhlungela iNdebe yoMhlaba ka-2014.